Kudzokorora maAlbham, playlists kana nziyo muApple Music | IPhone nhau
Maitiro ekudzokorora maalbum, playlists kana nziyo muApple Music
Apple Music yave imwe yemapuratifomu inonyanya kushandiswa zvenguva. Mudzidzi anoderedzwa uye kuyedzwa kwemwedzi mitatu kwawedzera huwandu hwevanyoreri kune Big Apple sevhisi. Kuti unakidzwe zvizere neruzivo rwekushambadzira mumhanzi, zvakakosha ziva kuti zvinoshanda sei zvakakwana. Kunyangwe iyo isingaratidze matambudziko mazhinji, pane zvimwe zviito zvakavanzika zvishoma.
Isu tese tine rwiyo rwekunakidzwa rwatakaramba tichiridza rwuchidzokororazve, kana dambarefu ratakada. Muchikamu chino tinokudzidzisa iwe ku otomatiki dzokorora zvinyorwa, maalbham kana nziyo muApple Music app paIOS.
Dzokorora maalbham, zvinyorwa zvekutamba, uye nziyo pane Apple Music
Rimwe remabasa ayo ese mimhanzi yekutamba mapuratifomu anoita kuti iwanikwe kune mushandisi iri kudzokorora. Inobvumira rwiyo kusunungura uye kudzokorora kusvikira mushandisi akanzura maitiro. MuApple Music iyi chiito zvinovhiringidza nekuda kwemusiyano weApple pakati pekudzokorora uye chiuno. Kuti unzwisise mashandiro akareruka eiyi maitiro isu tinokutungamira iwe mune mashoma matanho akareruka, ayo anowanikwa pazasi:
Vhura iyo Apple Music app pane yako kifaa.
Para dzokorora chero mhando yezvinyorwa chingoridza rwiyo, dambarefu kana playlist.
Kamwe kutamba kwatanga, isu tinoshambira kumusoro kubva pasi kuti tinopinda maApple Music control.
Isu tinotsvedza uye tinowana maviri ma icon: aleatorio (inokutendera kuti uratidze playlist kana dambarefu) uye dzokorora (inova sarudzo inotifadza).
Kana isu tikadzvanya kamwechete pane yekudzokorora icon, inozotsvuka. Pane kudaro, kana tikazvimanikidza zvakare nhamba 1 inoiswa muchiratidzo. Ngatione zvinorehwa neimwe yeiyi misiyano:
Chaicho icon: ichadzokorora iyo albam kakawanda, kureva kuti, kunze kwekunge tamanikidza random.
Icon ine "1": rwiyo rwatiri muchimiro chechiuno ruchadzokororwa.
Kana isu tiri murwiyo kana imwe chete (tisina dzimwe nziyo pane irwo runyorwa) isu hatine hanya neimwe yemisiyano miviri. Kune rimwe divi, kana isu tiri mukati medamba, kana tikadhinda kamwe, rese rwiyo ruchadzokororwa, kune rimwe divi kana tikadhinda kaviri, rwiyo chete rurikuimba parizvino rwuchadzokororwa
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekudzokorora maalbum, playlists kana nziyo muApple Music
Iyo Banco Santander app inovandudzwa nenhau dzinonakidza
Isu takaedza iyo nyowani Energy Sistem mahedhifoni 2 pamusoro-nzeve mahedhifoni